Lavazza Tiny Milina Espresso - Famolavolana
Milina Espresso Masinina espresso kely izay sariaka mitondra traikefa kafe italiana ho any an-tranonao. Mahafaly an'i Mediterane ny famolavolana - mirakitra ireo sisan-trano fototra ofisialy - mankalaza ny loko ary mampihatra ny fiteny famolavolana an'i Lavazza amin'ny fivoahana sy an-tsipiriany. Ny akorandriaka dia namboarina tamin'ny ampahany iray ary malefaka sady voafehy tsara. Ny foibe afovoany dia manampy ny rafitry ny maso ary ny modely aloha dia mamerina ny lohahevitry ny rindrambaiko matetika izay hita amin'ny vokatra Lavazza.
Anaran'ny tetikasa : Lavazza Tiny, Anaran'ny mpamorona : Florian Seidl, Anaran'ny mpanjifa : Lavazza.
Milina Espresso Florian Seidl Lavazza Tiny